NY FAHAFATESANY NO NAMONJENY ANAY TAMIN’NY FAHAVEREZANA MANDRAKIZAY! – filazantsaramada
NY FAHAFATESANY NO NAMONJENY ANAY TAMIN’NY FAHAVEREZANA MANDRAKIZAY!
Publié parfilazantsaramada	 octobre 2, 2015 septembre 29, 2015 Laisser un commentaire sur NY FAHAFATESANY NO NAMONJENY ANAY TAMIN’NY FAHAVEREZANA MANDRAKIZAY!
« Fantaro ankehitriny fa Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin’ny tànako. » Deot 32:39
***Jehovah Andriamanitra no namorona izao tontolo izao, ary Izy koa no namorona ny olombelona. Ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra. Teny indraim-bava ihany dia nahazoany namorona: MISIA dia nisy. Koa na dia ny hamelona ny efa maty aza dia ananany fahefana koa. Ry zatovo, hoy Izaho aminao: miarena! Teny nataony tamin’ilay zatovo lahy zanaky ny mpitondrantena maty. Toy izany koa ny fahefana nananany tamin’i Lazarosy anadahin’i Maria izay maty. Hoy Jesosy tamin’i Lazarosy maty efatra andro: Ry Lazarosy mivoaha! Dia nivoaka ny maty nisy fehim-paty! Tena Andriamanitra tokoa no mahafaty sy mahavelona.
***Jehovah no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin’ny tanany. Raha ny fahafatesana aza moa noreseny, inona izay aretina? Izy manampahefana handratra sy hanasitrana. Izay aretina rehetra nentina teo amin’i Jesosy dia nositraniny avokoa! Mbola fahefana eo an-tànan’Andriamanitra ny hamela na tsy hamela ny olona iray ho azon’ny fahafatesana, ary na dia efa ao anatin’ny fahafatesana aza dia mbola eo Aminy ihany ny fahefana raha hamerina ny ain’iny olona iny Izy! Izany no maha-Andriamanitra azy.
***Inona ary no anjarantsika olombelona? Ny anjarantsika dia ny mitoetra amin’ny finoana an’Andriamanitra velona! Raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra! I Paoly moa dia nanambara ao amin’ny epistily ho an’ny Filipiana fa hankalazaina amin’ny tenany i Kristy na amin’ny fiainana na amin’ny fahafatesana. Fa Kristy no antony ahavelomany! Ary nolazainy koa hoe raha ao amin’i Kristy izy, dia mbola miteny koa izy hoe: ny fahafatesana no ahazoany tombony. Raha miaina izao andro sarotra izao ary isika, raha avy ny Tompo Jesosy eny amin’ny rahon’ny lanitra, raha avy ny androntsika, dia ny andro hahafatesantsika, aiza no hisy antsika? Moa hiara mifaly amin’ny Zanak’ondry ve isika, amin’ny andro fampakarambady: moa isan’izay vohana vavahady ve isika? Moa isan’ieo virijiny dimy hendry ka nitahiry ny solika fitaiza hatramin’ny farany? Sao dia variana amin’ny haren’ny tany? Sao dia variana amin’ny voninahitra samy hafa? Sao dia variana amin’ny fisehona ivelany ihany ka manana ny anarana ho velona nefa rehefa mandinika Andriamanitra dia maty ihany? Aoka isika handinika tsara fa Jehovah Andriamanitra mandinika ny miafina rehetra sy ny miharihary koa! Raha diso lalana isika dia fotoana mety hiverenantsika amin’ilay fitiavana voalohany, dia ny nanoloran’i Jesosy Kristy ny ainy HO FANOMEZANY IZAY REHETRA MINO AZY FIAINANA MANDRAKIZAY!
Publié parfilazantsaramada octobre 2, 2015 septembre 29, 2015 Publié dansUncategorized